mercredi, 14 juin 2017 21:40
HJRA Anosy: Andro iraisam-pirenena ho an'ny fanomezan-drà
Isaky ny 14 jiona no ankalazana ny andro manerantany ho an’ny mpanome ra antsitra-po.
Eto Madagasikara dia mankalaza izany ihany koa izay natao tetsy amin’ny Hopitaly Ravoahangy Andrianavalona Ampefiloha.
Nisy moa ny lohahevitra nobanjinina tamin’izany indrindra tamin’ity taona ity dia ny hoe "Ny fanomezan-dra manoloana ireo voina tampoka ka amaliana ny fanontaniana hoe ny azo atao? Manomeza rà, manomeza hatrany."
Koa manentana ny vahoaka Malagasy mba hiroso amin’ny fanomezan-drà antsitra-po ahatratrarana ny tanjona napetraky ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS dia ny hoe fampiasana rà 100 isan-jato avy amin’ireo mpanome rà an-tsitrapo manerana izao tontolo izao amin’ny taona 2020.
Tsy mijanona ny 14 jiona fotsiny izany fanomezan-drà izany fa misy hatrany ny fandraisana izay afaka miroso amin'izany mandavan-taona.
Sambava: Nieren-doza Rtoa Soaline, depiote teo aloha
"Ity no nanaitra ahy tamin’ny torimasoko", hoy Ramatoa Soaline, depioten’i Sambava teo aloha. Ny alin’ny talata hifoha ny alarobia 14 jiona, tokony tamin’ny iray ora maraina no nitranga ny loza teo antokotany Analamandrorofo.
Olona telo niaraka tamin’ny mpamily no tao anaty fiara Minibus Mazda, izay efa tafavoaka nialohan'ny nahatongavan’ny olona hamonjy ary nandositra avy hatrany izy ireo.
Ny seza “salon” izay amidy 4 hetsy sy 1 tapitrisa Ariary no nianjeran’ity fiara ity ka tsy nisy azo noraisina.
Tonga nijery ny zava-nisy ny avy amin’ny Polisim-pirenena sy ny Zandary. Ny zavatra tsapa dia nihitsoka teo amin’ny “4ème” ny “vitesse”-n’ilay Mazda.